Kungani kunezinkolo pink osenyameni sokukhulelwa ekuqaleni?
Ngokusho kochwepheshe, ukugqamisa Yilowo nalowo muntu wesifazane / amantombazane yokuzala nendawo ukuba. Ukungezelela kilokho, bayabambisana ngisho kuyinsakavukela khona, kodwa kulokhu kubalulekile acabangele uhlamvu yabo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ushintsho Sabelo ngezinye izikhathi lowehlukile futhi kwezinye izimo ngisho ukungaguquguquki, isibonelo, kuncike ikakhulukazi esikhathini. Ngisho nabesifazane ngendlela umndeni kufanele ayimpoqo. Kodwa ngezinye izikhathi wezifo zabesifazane iSifo okubizwa ngokuthi gqamisa pink ngasekuqaleni izigaba inkathi yokukhulelwa. Kungani kwenzeka lokhu? Yini ukukhethwa ekukhulelweni ekuseni ubizwa kuyinsakavukela?
Eyokuqala Kumele kuqashelwe ukuthi kunoma yisiphi isimo phambi pink osenyameni kubonisa khona lo okuthiwa capillary igazi, kodwa izinto eziningi ezincane kakhulu. Ngokuvamile lolu hlobo isimo kwenzeka cishe ngemva socansi. Ezinye bacabange ukuthi osenyameni pink ekukhulelweni ekuseni kuyisibonakaliso lokuqala ukuvela hormone zesifazane. Awa, akusinjalo. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi isizathu - okubizwa ngokuthi ukuguguleka kwenhlabathi wesibeletho, ngezinye izikhathi lakhulisiwe kwesibeletho. Into wukuthi nge zonke isenzo sokuya zenzeka yoxhumana nabo, futhi ngenxa yalokho, ukuguguleka iqala opha. Kulokhu, ungakhathazeki, kodwa ukuxwayisa udokotela namanje kunesidingo. Kakhulu akuvamile esikhundleni waphatha abesifazane ngenhlonipho ukuguguleka kwenhlabathi. Ngokuvamile, amuke ngemuva ukubonakala ingane ezweni.
Ngakolunye uhlangothi pink osenyameni sokukhulelwa isencane uhlobo isignali ukuthi isidumbu sowesifazane okungalungile. Ngokuvamile, babonisa ushintsho kwama-hormone. Ngaphezu kwalokho, ukudedelwa pink ekukhulelweni ekuseni ngezinye izikhathi kuvele ukwenqaba esibelethweni, futhi, kamuva, benethuba yisisu. Kulesi simo, kufanele ngokushesha xhumana nodokotela wakho. Mhlawumbe usazokwazi ukulondoloza ingane.
osenyameni Pinkish, kuhlangene oyiphunga kunalokho okunoshukela esithweni sangasese ngezinye izikhathi kuvela izimpawu zokuqala okuyinto athuthukiswe ukutheleleka. Kulesi simo, udokotela kufanele ngempela ukuthatha swab nolunye uvivinyo oluhlobene ukuze kutholakale uhlobo isifo. Kuphela ezimweni ezimbi kakhulu zidinga imithi yokwelashwa. Ukuze sigweme isimo esinjalo, ochwepheshe batusa kakhulu ukuthi ngaphambi empeleni lokukhulelwa ingane ukuba kudlule bonke ukuhlolwa ngesikhathi esifanayo ngaba nokuzethemba ukuphepha esizayo ingane.
Ngo iningi kulezi zimo ezingenhla, njengoba umthetho, akudingeki ukuba sikhathazeke. Nge ukubonisana ngesikhathi esifanele nge udokotela wezifo zabesifazane abakwazi ukuxazulula zonke izinkinga futhi bayaqhubeka bejabulela isikhundla sabo ezithakazelisayo. Nokho, uma ubhekana ukopha lwesitho sangasese sowesifazane ekukhulelweni ekuseni, ungaqala nomsindo we-alamu. Into wukuthi ngokuvamile Esimweni esinjalo kufakazela ukuthi isisu nokuguqulwa (nge ohambisana nobuhlungu obukhulu esiswini) noma ihlukane kwanoma placenta. Ngakho, kunoma yiliphi icala, kufanele ngaphandle kokulibala ukubiza i-ambulensi kanye ahlolwe ngokuphelele. Esimweni esinjalo kungenzeka ulahlekelwe hhayi kuphela nomntwana esizalweni, kodwa futhi ungalokothi uthole abakhulelwe.
Ngingathola abakhulelwe esesikhathini
Izimpawu kwabesifazane abakhulelwe: Folk ukuhlakanipha noma umhlahlandlela esenzweni
Can sizakulahla ngesikhathi sokukhulelwa. Ukuqunjelwa ekukhulelweni
Lapho kukhona okuzenzakalelayo eRussia: ikusasa libonakala ukuthi ayemakhulu amathemba ababenawo
Isikhundla Military SS. Amazinga we Wehrmacht futhi SS
Stadium "Emirates": Umlando kanye nencazelo
Isifo wamabele: simila webele